किन खाने काँचाे केरा ? काँचो केरा सम्बन्धी केहि उपयाेगी जानकारी - ज्ञानविज्ञान
किन खाने काँचाे केरा ? काँचो केरा सम्बन्धी केहि उपयाेगी जानकारी
केरा अर्थात सदाबहार फल । बजारमा केरा बाह्रैमास पाइन्छ । कसैलाई कमजोरी भयो र तत्काल इनर्जी चाहियो भने एउटा केरा क्वाप्प खाँदा हुन्छ, केही मिनटमै शरीरको कमजोरी हराइहाल्छ । केरामा भएका तत्वहरु तत्काल शरीरले ग्रहण गरीहाल्छ, यसलाई पाचनको लामो प्रकृयामा अल्झीनै पर्दैन ।
यही कारण केरा किलोको भाउमा हैन, दर्जनको भाउमा बिक्छ । किनकी, केराका गुण पनि दर्जनौं छन् । पाकेको केरामा अत्याधिक पोषणतत्व पाइन्छ । केरामा आइरन, क्याल्सियम तथा भिटामिन प्रशस्त मात्रामा हुन्छ ।
यो त पाकेको केराको कुरा भयो । काँचो केरा पनि कम हितकर छैन । काँचो केरा खाँदा शरीरमा आइरनको पुर्तिमात्र गर्दैन, कयौ रोग लाग्नबाट बचाउँछ ।
काँचो केराका फाइदा
शरीरका लागि पोटासियम निकै आवश्यक छ । तर, पोटासियम सबै खानामा पाइदैन । यही कारण शरीरमा प्रायः पोटासियमको कमी भइरहन्छ । पोटासियमको मुख्य काम हो, शरीर स्फूर्त राख्नु र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु ।
काँचो केरा पोटासियमको भण्डार हो । काँचो केरामा भिटामिन बी ६ तथा भिटामिन सी पाइन्छ, जसले कोशिकाहरुलाई पोषण प्रदान गर्छ । काँचो केरामा पाइने एन्टी अक्सिडेन्ट र आवश्यक स्टार्चले शरीरलाई स्वस्थ राख्छ ।
मधुमेहका विरामीका लागि काँचो केरा अति उत्तम । काँचो केरामा भएको टरर्रोपनले रगतमा सुगरको मात्रा सन्तुलनमा राख्छ । धेरैजसो मधुमेहका विरामीलाई अति गुलिया फलफुल खानबाट वञ्चित गरिन्छ । काँचो केरा भने मधुमेह नियन्त्रण गर्ने एक औषधी नै हो । यही कारण उनीहरु काचो केराको तरकारी पेटभरी खानसक्छन् ।
कब्जीयत हटाउने काइदा
विहान शौचालयमा राम्ररी दिसा निख्रदैन । यसैलाई कब्जीयत भनिन्छ । कब्जीयतका कारण पेटमा विभिन्न रोग लाग्ने गर्छ । यदि तपाइलाई पनि कब्जीयत छ भने काँचो केरा खाइहाल्नुस् । काँचो केराको अचार, तरकारी बनाएर खान सकिन्छ । काँचो केरामा अत्याधिक मात्रामा फाइबर हुन्छ ।
फाइबर अर्थात रेशायुक्त केराले हाम्रो पेट सफा गर्छ । काँचो केरा खाएपछि शरीरमा विषाक्त जम्न पाउँदैन र विस्तारै कब्जीयतको समस्या समाधान हुँदैजान्छ । काँचो केरा यस्तो क्षारीय भोजन हो, जुन ग्यास्ट्रीकका विरामीका लागि समेत लाभकारी छ ।
नियमती रुपमा काँचो केरा खाने हो भने मानिसको पाचनतन्त्र बलीयो हुन्छ र पेटमा अतिरिक्त बोसो जम्न पनि पाउँदैन । बोसो जम्न नपाएपछि मोटो हुने चिन्तै रहेन । यसले गर्दा हाम्रो शरीरको तौल घट्न मद्धत पुग्छ ।
पायलको समस्या हटाउँछ
यसका साथै केरा दृष्टि शक्तिमा फाइदाजनक मानिन्छ भने पोटासियमको राम्रो स्रोत भएकाले पनि मुटुका रोगीलाई फाइदा गर्छ, उच्च रक्तचाप घटाउन मद्धत गर्छ । उच्च आइरन हुने भएकाले रक्तअल्पता हुन दिँदैन ।
हामीले केरा सम्बन्धी केहि थप जानकारी दिइएका छाै
सुत्नुभन्दा पहिला उमालेर खाने गर्नुहाेस् केरा, केहि दिनमै देखिनेछ यस्तो चमत्कार !
केराको फाइदाको बारेमा तपाईले धेरै सुनेको पढेको हुनुहुन्छ होला । केरामा पोषक तत्व पाइन्छ । यसको सेवन गर्नाले हाम्रो शरीरलाई धेरै फाइदा गर्छ । आयुर्वेदमा केराको सेवनलाई ऊर्जावर्धक र बलवर्धकको रूपमा वर्णित गरीएको छ ।
यदि तपाईलाई निन्द्रा नलाग्ने समस्या छ भने एउटा पाकेको केराका साथै एउटा सानो दालचिनीको टुक्रा लिनुहोस् र एक कप पानी लिनुहोस् । यसपछि, पानीमा दालचीनी राख्नुहोस् र यसलाई उम्लिन दिनुहोस् । पुरै उम्लिसकेपछि केरालाई बोक्रा सहित सानो-सानो टुक्रामा काट्नुहोस् र उम्लिरहेको पानीमा हाल्नुहोस् ।
स्पोर्ट्स ड्रिङ्कभन्दा केरा खानु राम्रो, के पाइन्छ केरामा ?
खेलाडीका लागि ‘स्पोर्ट्स ड्रिङ्क’भन्दा पनि केरा राम्रो रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । खेलाडीले खेलका क्रममा उपभोग गरेका कार्बोहाइड्रेटको प्रभावबारे गरिएको अनुसन्धानमा अनुसन्धानकर्ताले केरामा पीडानाशक गुण रहेको पत्ता लगाएका थिए । केरा बिक्रेता कम्पनी डोल फुड्सको सहयोगमा भएको अनुसन्धानले यो तथ्य पत्ता लागेको हो ।
प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डेभिड निम्यानका अनुसार स्पोटर््स ड्रिङ्कको विकल्प खोज्नेहरुका लागि केरा उपयोगी छ । तर, शारीरिक अभ्यासका दौरान कति केरा खाने भन्नेबारे वैज्ञानिकहरुले त्यति स्पष्ट पारेका छैनन् । शारीरिक अभ्यासका क्रममा केरालगायतका फलफूलले पार्ने असरबारे भने उनीहरु अध्ययन गर्ने योजनामा छन् ।
के पाइन्छ केरामा ?
केरामा भिटामिन र खनिज प्रचूर मात्रामा पाइन्छ । यसमा पाइने भिटामिन सी, भिटामिन बी, रिवोफ्लाबिन, फोलेट, प्यान्टोथेनिक एसिड र नियासिनका कारण अन्य फलभन्दा उत्कृष्ट फल मानिन्छ। यसमा पोटासियम, म्याग्नेसियम, तामाजस्ता खनिजहरु पनि प्रचुर रुपमा पाइन्छ । यो फाइबर र प्रोटिनको असल स्रोत पनि हो ।
केरालाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्यामा लाभदायी मानिन्छ । केरामा चिल्लो पदार्थ नहुने भएकाले तौल घटाउँछ । हड्डी मजबुत पार्छ ।
यस्तै, यसले पायल्सको समस्या हटाउँछ भने फाइबरको मात्रा प्रचुर हुने भएकाले कब्जियत हटाउँछ र दिसा सजिलै गराउँछ । यसले आन्तरिक पाचन प्रणालीमा पनि सुधार गर्छ र ‘कोलोरेक्टल क्यान्सर’ हुन दिँदैंन ।
लामो समयदेखि केरा ‘एन्टासिड’ खाद्य पदार्थका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । यसमा पाइने तत्वले पेटका कोषिकाको क्रियाकलापलाई बढाइदिन्छ र एसिड बन्न दिँदैन । यसले अल्सरको विकासमा कारक मानिएका पेटका खराब ब्याक्टेरिया नष्ट गर्छ ।
साथै, केरालाई दृष्टि शक्तिका लागि पनि फाइदाजनक मानिन्छ भने पोटासियमको राम्रो स्रोत भएकाले मुटुरोगी फाइदा गर्छ । यस्तै, उच्च रक्तचाप घटाउन मद्दत गर्छ । केरामा उच्च आइरन हुने भएकाले यसको सेवनले रक्तअल्पता हुन दिँदैन ।
कतिकाे फाईदाजनक छन् त बहिर बाेक्रामा कालो दाग भएको केरा स्वास्थ्यका लागि ?
केरा सेवन गरिरहेकाे हुनुहुन्छ ? बजारबाट केरा किनेर ल्याँउदा होस् वा घरमा पाकेको केरा खाँदा होस् सबैले पहेँलो र राम्रो केरा नै रोज्ने गर्छन् ।
धेरैलाई लाग्न सक्छ हलुका कालो दाग लागेको केरा विग्रेको हुन सक्छ सोही कारण पहेँलो केरा नै हरेकको रोजाईमा पर्ने गर्छ । तर, हामीमध्ये धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ की कालो दाग लागेको केरा स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ भनेर ।
जब केरा धेरै पाक्छ तब यसका फाइदा कयौं गुणा बढेर जान्छ । केरामा लाग्ने कालो दाग पनि कुहिएर वा विग्रिएर नभई पाक्दै जाँदा देखिने दाग हो । यस्तो कालो दाग देखिएको केरा सेवन गर्दा क्यान्सर रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि हुने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
यसले शरीरमा ‘एन्टिअक्सीडेन्टन’ को मात्रा तथा सेतो रक्त कोषको क्षमतामा वृद्धि गर्ने अध्ययनले देखाएको छ । त्यस कारण पाकेको केरामा कालो दाग बस्यो भन्दैमा फाल्नुको सट्टा तुरुन्तै खाने गरौं ।
कालो दाग लागेको केराले स्वास्थ्यलाइ दिने फाइदाहरु
यस्तो केरामा ‘एन्टी एसिड’ गुण हुन्छ । जसले टाउकोमा हुने दुखाई तथा एसिडिटीलाई राहत दिन्छ ।
उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण राख्छ
केरामा ‘पोटासियम’ को मात्रा अधिक रहनुको साथै ‘सोडियम’ को मात्रा धेरै कम हुन्छ । जसले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण राख्छ । यसले शरीरमा पानीको मात्रा कमी हुन दिदैन ।
जापानमा भएको एक अध्ययन अनुसार जुन केराको बोक्रामा कालो दाग हुन्छ, त्यसमा ‘टीएनएफ’ नामक तत्वको भरपुर मात्रा रहन्छ । जसलाई ‘टियुमर नेक्रोसिस फ्याक्टर’ भनिन्छ । यसले शरीमा क्यान्सर पैदा गराउने कोषिकासँग लड्न सहयोग पुर्याउँछ ।
पेट सम्बन्धी रोग
यस्तो केरा खानाले पेट पोल्ने समस्या, ग्यास, एसिडिटीबाट बचाउँछ । यसका लागि केरालाई चीनीसँग मिसाएर खादा धेरै फाइदा दिन्छ । ‘म्याग्नेसियम’ को भरपुर मात्रा रहेको हुदा केरा सहजै पचाउँन सकिन्छ । जसले शरीरको ‘मेटाबोलिजम’ दुरुस्त राख्छ ।
कालो दाग भएको केराको सेवनले एनेमिया अर्थात् रक्त अल्पत्ताबाट जोगाउँछ । यस्तो केराको सेवनले रगतमा आइरनको मात्रा बढाउँछ । जसले ‘हेमोग्लोबिन’ मा फाइदा पुग्छ । साथै शरीरमा शक्ति प्रदान गर्छ ।
जव पेटको अल्सर हुन्छ तव धेरै खाने कुरा बार्नु पर्ने हुन्छ । तर कालो धब्बा लागेको केरा निर्धक्क खान सकिन्छ ।
कब्जीयतका लागि फाइदाजनक
कब्जीयत भएको अवस्थामा केरा खाँदा यसले धेरै फाइदा दिन्छ । यसले प्राकृतिक रुपमा पेट सफाइ गर्न सहयोग गर्छ ।
याे भिडियाे पनि हेर्नुहाेला जानकारीका लागि
Don't Miss it दुध सँग यी कुराहरु खाएमा बिष बराबर हुन्छ, दुध कसरी र कुन कुन बेला पिउने ? जानीराखौ
Up Next हरियो खुर्सानी खानुहोस् र क्यान्सर, छालाको संक्रमण जस्ता रोगहरुबाट बच्नुहोस् – जानकारीका लागी शेयर गर्नुहोला
भिडियो, सामान्य ज्ञान
दिमाग खियाउँने प्रश्नहरु – के तपाई जवाफ दिन सक्नु हुन्छ ?
12 months ago mygyanbigyan
शाकाहारीले खानै पर्ने खानेकुराहरू यस्ता छन्
बच्चाको विकास कति बर्षमा कति प्रतिशत हुन्छ ? जान्नुहाेस
गर्भमा रहँदा ३० प्रतिशत : गर्भको रुपमा आमाको पेटमा रहँदा शिशुको ३० मानसिक तथा बौद्धिक विकास भइसकेको हुन्छ । पहिलो…
खाना स्वादका लागि होइन, शरीरका लागि
हामी किन खान्छौ ? यो प्रश्नको सटिक जवाफ खोज्ने हो भने तपाईंलाई सोधिरहनुपर्दैन कि, हामीले के खानुपर्छ ? खानासँग हाम्रो…
करियरमा कसरी सफलता हासिल गर्न सकिन्छ ? जान्रुहाेस्
करियरमा सफल कसलाई पो हुनु छैन र ? अहिलेको युगमा हरेक व्यक्ति सफल हुन चाहन्छ । हरेक व्यक्तिको एक मात्र…
जाडोमा दिनदिनै ओखर खानुका फाइदा, छुटकारा पाउनुहाेस् यस्ता थुप्रै समस्या बाट !
ओखर हामीले देखी, खाइ आएको फल हो । प्राय हामीले तिहारको समयमा प्रयोग गर्ने यो फल अन्य समयमा हामीले खासै…